बसन्तपुर देखि घुस्की हुदै भारतकाे सिमा सम्मको सडक निर्माण हुँदै
- अन्सार अन्सारी
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख ०३, २०७५ समय: १९:५८:०५
भुटाहा। सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाले बसन्तपुर देखि घुस्की हुदै भारतकाे घुरना घुस्की सिमा सम्मको सडक निर्माण हुँदैछ। साे सडक वडा नम्बर ५ साबिकको बसन्तपुर, वडा नम्बर ६ र ७ साबिकको घुस्की गाविस रहेको बाटो हाे।
सडक प्रदेश नम्बर १ का उप-सभामुख शारदा पाेखरेलद्धारा शिलान्यास समपन्न भएको छ। सो सडक हरिनगर गाउँपालिका सहयोगमा ११ कराेड ४२ लाख ९ हजार २ सय ५० को लागानी रहेको हाे। लम्बाई ५ हजार ४ सय ६२. ६४ मिटर रहेको छ। चाैडाइ ४० फिट रहेको निर्माणकार्य भई रहेको जि .भी. निर्माण कम्पनीको प्रोप्राइटर जय प्रकाश साहले बताए ।
सडक शिलान्यास कार्यक्रमको अध्यक्षता हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारीको अध्यक्षतामा समपन्न भएको हाे। प्रमुख अथिति प्रदेश नम्बर १ का उप-सभामुख शारदा पाेखरेल विशेष अथिति प्रदेश सभा सदस्य हाजि ताहिर अन्सारी तथा अथितिहरुमा साहायक सिडियाे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख नारायण प्रसाद चिमडिया, सिमा सुरक्षा प्रहरी बल सुनसरी प्रमुख रिऋी कार्की, नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरी शाखा जिल्ला अध्यक्ष अमर खडका,एडभान्स एफ.एम .का प्रवन्धक निर्देशक ताबिल अन्सारी हरिनगर कार्यपालिका प्रशासनीय अधिकृत कृष्ण बाहादुर कार्की, देवांजग गाउँपालिका अध्यक्ष लालि प्रसाद मेहता, हरिनगर गाउँपालिका उपाध्यक्ष रिमझिम भगत, १ नम्बर वडा अध्यक्ष अबदुल लतिफ अन्सारी २ नम्बर वडा अध्यक्ष हाजि युनुस अन्सारी ६ नम्बर वडा अध्यक्ष इसराइल अन्सारी ७ नम्बर वडा अध्यक्ष नसीर खाँ, लगाएतकाे उपस्थित रहेको थियो ।